Kedu otu Twitter si enyere gị aka ịbanye Njikọ miri emi | Martech Zone
Monday, September 15, 2014 Douglas Karr
Enwere nnukwu mgbanwe na-eme na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akpali akpali. Ikike ịkwanye njikọ ahụ ozugbo na mmekọrịta mmadụ na ibe ya kama ịghaghachi azụ na saịtị gị. Onye ọ bụla maara na oge ọ bụla ị gwara mmadụ ka ị pịa, enwere ndapụta na ọnụego nzaghachi.
Maka ụlọ ọrụ na-akwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na Twitter, na-eme ka onye ọrụ si na ire ere, gaa na ngwaahịa ngwaahịa, na peeji nke "tinye na ụgbọ ibu", na peeji nke ịkwụ ụgwọ, ịzụta ikpeazụ ga-eme ka agbahapụ dị elu. Twitter na-enyere aka na ụfọdụ iwepụta ihe na-akpali akpali nke Kaadị Twitter na Zụta site na Tweet bọtịnụ.
Kaadị Twitter ekwe ka ndị ahịa tinye foto bara ụba, vidiyo na ahụmịhe mgbasa ozi iji chụkwa njikọ aka. Nke a bụ ihe atụ nke a Player Kaadị:
Jikọọ ma chọpụta: Akụkọ Twitter na 1:40 http://t.co/TRRiDAbkUR
- Mgbasa ozi Twitter (@TwitterAds) November 8, 2013
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnwale Kaadị Twitter pụọ, Ihe mgbaàmà - Onye Mmekọ Mgbasa Ozi Azụmaahịa nke Twitter - amalitela beta beta site na iji usoro njikwa ọdịnaya. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịmepụta kaadị na ibe njedebe na-enweghị koodu ederede site na iji interface ha. Ndị mgbasa ozi na-achọ ịlele nsonaazụ dị elu dị ka elele vidiyo, ọgbọ ndu, na ịzụrụ ihe nwere ike ịmepụta ọtụtụ ọdịiche ugbu a iji chọta njikọta mmeri nke isi okwu, onyonyo, oyiri, URL, na bọtịnụ ịkpọ oku.
Ihe Okike Twitter Card
Nlele Ọdịnaya Twitter Kaadị
Ihe mkpuchi Omenala ebe ị na-aga na-abịa na ntinye aha Twitter nke akpakọrịta. Mkpado mgbanwe ndị a na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịgbaso mgbanwe na ngwaọrụ niile na ọtụtụ nleta, nke na-agaghị ekwe omume na mgbasa ozi dijitalụ, ịme ngosipụta nke ike, nke na-eme ka arụmọrụ nke mgbasa ozi pụta ìhè. na retarget na mkpanaka na gafee ngwaọrụ.
Zụta site na Tweet
Twitter na-anwale a Kpọtụrụ zụrụ bọtịnụ kpọmkwem n'ime iyi, ọganihu na-akpali akpali maka ndị ọkachamara na ecommerce. Nke a abụghị naanị ihe na-atọ ụtọ n'ihi ịdị mfe nke iji ya, ọ dịkwa oke mma n'ihi na ndị na-azụ ahịa nwere ike idobe ozi ịkwụ ụgwọ ha n'enweghị nsogbu na Twitter ma ghara itinye ozi ahụ ugboro ugboro maka ụlọ ahịa ọ bụla ha chọrọ iji azụmahịa.
Nke a bụ mmalite nke ọrụ ụlọ anyị na Twitter iji mee ka ịzụ ahịa sitere na ekwentị mkpanaaka dị mfe ma dịkwa mfe, na-atụ anya na-atọkwa ụtọ. Ndị ọrụ ga-enweta nnweta na ngwa ahịa ha enweghị ike ị nweta ebe ọ bụla ọzọ ma nwee ike ịme ha ihe ziri ezi na ngwa Twitter maka gam akporo na iOS; ndị na-ere ahịa ga-enweta ụzọ ọhụụ iji mee ka mmekọrịta ha na ụmụazụ ha na-ewu gaa ahịa.
Tags: zụta site na tweetmgbanyegwakọtakaadị ọkpụkpọPlọ ahịaTwitterbọtịnụ ịzụta twitterkaadị twitterOnye Mmekọrịta Platform Platform Twitter
Ahịa Gị A Na-Erite Uru nke Social Video?